एआरएन पाेर्चुगल अध्यक्ष गैरेलाई सामाजिक सम्मान
पाेर्चुगल/ गैरआवासीय नेपाली संघ (एआरएनए) पोर्चुगलका अध्यक्ष तिलक गैरेलाई कदर पत्र प्रदान गरिएको छ । २४ न्युजप्रेस डट कम ...
प्रेम के हो ? कसरी अनुभव गर्ने ? कसरी बुझ्ने ?
प्रेम मानव जीवनको भावनात्मक शब्द हो । तर, यसलाई परिभाषित गर्न असम्भव छ । प्रेमलाई शब्दमा परिभाषित गर्न उचित पनि हुँदैन् ...
बजेटले सबै क्षेत्र समेटे पनि पुरानै पद्धतिमा आधारित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १४ खर्ब , ७४ अर्ब , ६४ करोड रुपै...
लिपुलेक विवादको वास्तविकता
तत्कालीन नेपाल सरकारको अकर्मण्यताका कारणले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश (हाल— ७ नम्बर प्रदेश) को बिकट उत्तरी जिल्ला दार्चु...
लोकतन्त्रकाे चुनौती – भ्रष्टाचार
शक्ति रहेकाद्धारा गरीने बेइमानी वा कपटपुर्ण आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूलयहरुको विरुद्ध आचरणला...
पर्यटकीयस्थल गुफापोखरी क्षेत्र र तरुनी डाँडा कसरी पुग्ने ?
प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण तीनजुरे, मिल्के जलजले(टिएमजे) क्षेत्र तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको संगमस्थल हो । पर्यट...